I-Baan Amber Thai-indlu yanamhlanje kunye nebanzi yaseThai
Indlu enendawo yokuphola yonke sinombuki zindwendwe onguBaan Amber Thai
I-villa yangoku & ephangaleleyo yaseThai, unamagumbi okulala ama-2, amagumbi okuhlambela ayi-2 kunye neshawari yegadi enye. I-villa ineendawo ezininzi ezinikezela ubumfihlo kunye nentuthuzelo kwaye inokuhlala abantu abayi-2-4. Imigangatho efakwe iithayile kunye neefeni zonke ziwugcina upholile, amathafa ayo kunye neesalas zamaplanga zinika indawo eninzi yokuphola, ukutya okanye ukuhlamba ilanga. I-Koh Mak isesisiqithi esinoxolo kwaye ilungile ukuba ufuna ukuzola kunye nokuphumla kwindawo eshushu.
I-villa isebenza ngokugqibeleleyo kumaqela amancinci osapho, izibini okanye abahlobo. Ikwihlathi/indawo yegadi enezinye iipropathi ezi-5 kwaye umgama olinganayo phakathi kweelwandle ezi-2 iAo Suan Yai kunye neAo Kao.
Umgangatho oPhambili :
Ikhitshi-indawo zokuhlala-zokuhlala zonke zisemgangathweni ophambili; ephangaleleyo kwaye ipholile kamnandi enkosi kwimigangatho enethayile. Uyilo lwayo oluvulekileyo lwesicwangciso lukwanceda ukuyigcina inomoya kwaye abalandeli kunye ne-1 AC yoncedo olongezelelweyo. Ikhitshi esebenzayo yesicwangciso esivulekileyo sisecaleni kwetafile yokutyela eyenziwe ngomthi enezihlalo ze-6, eli nqanaba livula kwindawo egqunyiweyo enetafile engaphezulu, iibhentshi ezimbini kunye nesala yokuphumla eyenziwe ngamaplanga, yonke ijonge kwigadi yevilla. Lo mgangatho ugqitywe ligumbi lokulala eliphindwe kabini elinefeni kunye negumbi elimanzi elahlukileyo elinendlu yangasese kunye neshawari yokuhamba.
Umgangatho oPhezulu :
Izinyuko zangaphakathi zikhokelela phezulu ukusuka kumgangatho ophambili ukuya kulo mgangatho uphezulu unegumbi eli-1 elikhulu lokulala i-AC, igumbi lokuhlambela eline-en-suite elineshawari yokuhamba. Kukwakho neewodrophu zakhe kunye nezakhe zokuhamba, iterrace yabucala enesala yeplanga. Njengegumbi ekukuphela kwalo kumgangatho ophezulu libanzi kwaye libucala kakhulu.
I-Baan Amber Thai Villa ikwihlathi/kwindawo yegadi phakathi kweAo Suan Yai kunye neAo Kao ngasentshona yesiqithi, kukho iindawo zokuchithela iiholide ezimbalwa ezikufutshane nokubandakanya iGood Time, Islanda, Cococape & Seavana. Iilwandle zinokufumaneka eAo Pra, eAo Suan Yai naseAo Kao, kunye nakwamanye amazwe.
I-Koh Mak Supermart yeyona venkile ikufutshane kwi-villa kumgama wokuhamba. Ithengisa izinto ezisisiseko ezifana namanzi, ijusi, i-snacks, izinto zangasese, iibhiya, i-ice-cream, i-ice, njl.
Kukho oomatshini bokuhlamba abasetyenziswayo (iingqekembe ezili-10 ze-baht kuphela) ezijikeleze isiqithi ukuba ufuna ukwenza nayiphi na into yokuhlamba iimpahla, unokuxhoma iimpahla zakho ngasemva kwi-villa kumgca weempahla obekwe ekunene kumgangatho othe tyaba.
Umbuki zindwendwe ngu- Baan Amber Thai
Eli likhaya leholide; umnini akazubakho xa iindwendwe zihleli.
Ukuba ababuki zindwendwe bakwisiqithi baya kufumaneka ukunceda abandwendweli abafikayo/abahambayo. Ulwazi malunga nokufika e-Koh Mak, amagqabantshintshi esiqithi kunye nezinto omawuzenze unokunikezelwa ngaphambi kokufika.
Ukuba ababuki zindwendwe bakwisiqithi baya kufumaneka ukunceda abandwendweli abafikayo/abahambayo. Ulwazi…
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Tambon Laem Ngop